we may use – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Ungathola eminye imininingwane mayelana nokuthi abasebenzisi bakwa-Google kanye nokuqukethwe okulondoloziwe emgomeni wokuphepha noma imibandela eyengeziwe Ezinhlelweni ezithize. Uma uthumela umbono wakho noma iziphakamiso mayelana Nohlelo, kungenzeka sisebenzise umbono wakho noma iziphakamiso ngaphandle kokukubophezela.
Singaphinde futhi sisebenzise igama olihlinzekayo ephrofayelini yakho yakwa-Google kuzo zonke izinhlelo esizihlinzekayo ezidinga i-akhawunti yakwa-Google. Ngaphezulu kwalokho, singaguqula amagama adlule ahlobene ne-akhawunti yakho yakwa-Google ukuze wethuleke ngokufanele kuzo zonke izinhlelo zethu. Uma abanye abantu sebevele bene-imeyili yakho, noma eminye imininingwane ekuhlonzayo, ungabakhombisa imininingwane yakho yephrofayela yakwa-Google evela emphakathini njenge gama kanye nesithombe sakho.